Blackburn Rovers oo Koobka FA Cup-ka Ka Reebtay Kooxda Stoke City “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxda Blackburn Rovers oo ka ciyaarta heerka labaad ee dalka ingiriiska ayaa u soo baxday quarter finalka koobka FA Cup-ka,ka dib markii ay 4-1 uga badisay kooxda kooxda Stoke City oo ka ciyaarta Premier League-ga.
Ciyaartan oo ka dhacday garoonkeeda Ewood Park oo ay ku ciyaarto kooxda Blackburn Rovers ayaa waxaa goolka la hor martay kooxda Stoke City,waxaana u dhaliyay ciyaaryahan Peter Crouch.
Ciyaaryahan Joshua King ayaa sedax gool hat-trick u dhaliyay kooxda Blackburn Rovers,halka goolka afaraad oo rigoore ahaa uu u dhaliyay ciyaaryahan Rudy Gestede.
Garsoorihii ciyaarta Anthony Taylor ayaa qeybtii danbe ee ciyaarta kaarka casaanka ah u taagay ciyaaryahan Geoff Cameron oo daafaca uga ciyaarayay kooxda Stoke City.
Taageerayaasha kooxda Blackburn Rovers ayaa ku oriyay tababaraha kooxda Stoke City Mark Hughes oo intii u dhaxeysay sanadihii 2004 ilaa 2008-da tababare u ahaa kooxda Blackburn Rovers.
Madaxweynaha Galmudug Oo Tababar U Soo Xiray In ka Badan 40 haween ah "Sawirro"